Fahotana fa tsy famoizam-po - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Fahotana fa tsy fahadisoam-panantenana?
Tena mahagaga tokoa raha nampirisika azy i Martin Melanchthon, Martin Luther tamin'ny taratasy iray: Aoka ianao ho mpanota ary avelao ny herin'ny ota fa lehibe kokoa noho ny ota ny fahatokisanao an'i Kristy ary mifaly amin'i Kristy fa mpanota. nandresy ny fahafatesana sy izao tontolo izao.
Raha vao jerena dia toa tsy mampino ilay fangatahana. Mba hahatakarantsika ny fampitandreman'i Lotera dia mila mijery akaiky ny teny manodidina ianao. Tsy antsoin'i Lotera ny faniriana hanao asa ratsy. Mifanohitra amin'izany aza, izy dia ny filazany fa mbola manota isika, kanefa tsy tiany atao fahakiviana isika satria matahotra isika fa hanaisotra ny fahasoavany amintsika Andriamanitra. Na inona na inona nataontsika fony ao amin'i Kristy, ny fahasoavana dia mahery vaika kokoa noho ny ota. Na dia nanota 10.000 isan’andro aza isika, dia tsy manan-kery ny fahotantsika manoloana ny famindram-po tafahoatra ataon’Andriamanitra.
Tsy midika akory izany hoe tsy maninona na miaina amim-pahamarinana isika. Fantatr’i Paoly avy hatrany izay hiandry azy ka namaly ireo fanontaniana hoe: “Inona no holazaintsika ankehitriny? Mbola hitoetra amin’ny ota ve isika mba hahery kokoa ny fahasoavana? dia izao no navaliny: Sanatria izany! Ahoana no tiantsika ho velona ao amin’ny ota rehefa maty isika? (Romana 6,1- iray).
Manaraka an'i Jesoa Kristy isika dia nantsoina hanaraka ny ohatr'i Kristy, ho tia an'Andriamanitra sy ny mpiara-belona. Raha mbola miaina eto amin'ity tontolo ity isika dia mila miaina miaraka amin'ilay olana izay hanota. Amin'izany toe-javatra izany, dia tsy tokony havelantsika hanelingelina antsika loatra ny tahotra sao tsy mahatoky ny fahatokian'Andriamanitra isika. Fa kosa, miaiky ny fahotantsika amin'Andriamanitra isika ary matoky bebe kokoa amin'ny fahasoavany. Karl Barth indray mandeha dia nametraka izany toy izao: Mandrara antsika ny ota hanao ratsy kokoa na hitovy amin'ny fahasoavana ny fahasoavana.
Ny kristianina rehetra dia mahatsapa fa ratsy ny ota. Na izany aza, maro ny mpino mila mampahatsiahy ny fomba hiatrehana azy ireo rehefa nanota. Inona ny valiny? Mibaboka ny fahotanao tsy manara-penitra amin'Andriamanitra ary mangataka famelan-keloka. Mandehana miditra amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana am-pahatokisana ary matoky azy fa hanome ny fahasoavany izy ary mihoatra noho ny ampy aza.